Wararka Maanta: Sabti, Mar 17, 2012-Sheekh Fu’aad Shongole oo Sheegay in ay guulo ka gaareen dagaallada ay kula Jiraan Dowladda KMG iyo AMISOM
Sheekh Fu’aad Shongole oo Sheegay in ay guulo ka gaareen dagaallada ay kula Jiraan Dowladda KMG iyo AMISOM Sabti, March 17, 2012(HOL): Sheekh Fu’aad Max’ed Qalaf (Shongole) oo kamid ah saraakiisha sar sare ee Xarakada Al-shabaab oo ku sugan magaalada Kismaayo ayaa khudbad uu ka jeediyay masaajid ku yaal magaalada waxa uu uga hadlay arimo badan oo ku saabsan xaaladda uu dalka marayo.
Sheekh Fu’aad oo Muxaadaro ka jeediyay masaajidka Hareed Yarow oo ku yaal xaafadda Guulwade ee magaalada Kismaayo ayaa sheegay in ay guulo la taaban karo ka gaareen dagaallada ay kula jiraan wax uu ugu yeeray Ciidamada dowladda Ridada ah iyo kuwa Krishtaanka, isagoona sheegay inaysan marnaba joojin doonin dagaallada ilaa ay iyagu ka guuleysanayaan.
Sheekh Fu’aad ayaa ugu baaqay dadka ku dhaqan magaalada Kismaayo in ay ka qeybqaataan dagaallada ka dhanka ah ciidamada dowladda KMG iyo kuwa AMISOM ee ku sugan Soomaaliya.
Sidoo kale waxa uu sheegay in raga katirsan dowladda KMG ay ka furmaan haweenkooda, maadaama sida uu sheegay aysan ahayn dad Muslim ah, waxaana uu xusay in ay banaantahay hantida shaqsiyaadka katirsan dowladda KMG.
Hadalkan kasoo yeeray Sarkaalkan katirsan xarakada Al-shabaab ayaa kusoo beegmaya xilli inta badan gobollada Koonfureed ee Soomaaliya ay ka socdaan howgallo ballaaran oo ka dhan ah Al-shabaab, kuwaasoo ay iska kaashanayaan ciidamada dowladda KMG, Ahlusunna Waljameeca, AMISOM iyo weliba ciidamada Itoobiya.
Sabti, March 17, 2012(HOL): Diyaarado dagaal oo la aaminsanyahay in ay leedahay dowladda Kenya ayaa duqeymo ka geystay deegaan lagu magacaabo Dhaaytubaako oo hoostada degmada Jilib ee Gobolka Jubada Dhexe. Loolan adag oo loogu jiro Buuxinta jagooyinka ka banaan shirgudoonka golaha Wakiiladda Somaliland iyo mudanayaal isu soo sharraxay 3/17/2012 11:47 AM EST